Akwụkwọ nri sitere na Kherson. Oge na ọnọdụ nke asọmpi dị elu - Journal "Nduku System"
Akwụkwọ nri sitere na Kherson. Oge na ọnọdụ nke asọmpi dị elu
в Na-elekwasị anya, News
A na-ebubata ngwaahịa ugbo sitere na mpaghara Kherson na Russia: cucumbers, poteto na-eto eto, tomato, strawberries, cherị toro na mpaghara a na-ebubata na mpịakọta ndị a ma ama (dị ka ozi gọọmentị, site na tọn 350 kwa izu) na Crimea, na nnyefe ndị a nwere. mmetụta a na-ahụ anya na ọnụahịa na ahịa mpaghara.
Cheta na mpaghara Kherson bụ otu n'ime mpaghara ndị na-emepụta ihe ọkụkụ na-emeghe na mechiri emechi: dị ka Ukrainian Club of Agrarian Business (UCAB) si kwuo, a na-emepụta ihe dịka 14% nke mkpokọta akwukwo nri nke Ukraine kwa afọ.
Ruo 2014, akụkụ dị mkpa nke owuwe ihe ubi Kherson dabara na mpaghara Russia. N'afọ a, nnyefe amalitela, ma o doro anya na n'ọdịnihu ọdịdị ala ha ga-agbasawanye. Kedu ihe ndị ọrụ ugbo Russia kwesịrị ịkwado maka?
Mkparịta ụka banyere okwu a abụghị ụbọchị mbụ, dịka ọmụmaatụ, na nkata telegram "Lukovody Rossii".
Onye isi nke ugbo ala Volgograd, Yuri Lemyakin, kwenyere na a na-ebuga yabasị n'ụba ekwesịghị ịtụ egwu: "E kenyere mpaghara ndị bụ isi na mpaghara Kherson maka ihe ọkụkụ nke nwere uru mbupụ: nke mbụ, ọ bụ soybean na ọka. Owuwe ihe ubi yabasị n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya ezughị ezu iji gboo mkpa anụ ụlọ nke mba ahụ, enwere ike ikpe nke a, n'etiti ihe ndị ọzọ, site na ọnụ ahịa: ọnụ ahịa nke eyịm kwa afọ maka eyịm na Ukraine n'ime afọ atọ gara aga bụ nkezi. okpukpu abụọ dị elu karịa na Russia.
Tụkwasị na nke ahụ, anyị ekwesịghị ichefu na ókèala ndị anyị na-atụ anya na ndị na-ebubata ngwaahịa ndị a na-arụ ọrụ ugbo na-ejupụta, e nwere ọtụtụ ndị na-eri ha. Echere m na anyị agaghị enwe mmetụta dị ukwuu nke mmụba, n'ime otu afọ, onye ọ bụla ga-enwe ike ime mgbanwe n'eziokwu ndị ọhụrụ. "
N'otu oge ahụ, Yuri Lemyakin na-ekwu na a ga-enye ya n'oge (oyi) eyịm si Kherson na mpaghara ndịda Russia (Krasnodar, Stavropol Territories, Rostov Region), na ọnụnọ ya n'ahịa nke mpaghara ndị a nwere ike ịghọ nsogbu. ndị na-emepụta obodo. Ma ọ dịghị mkpa ichere maka oge opupu ihe ubi n'afọ a, ebe ọ bụ na ịgha mkpụrụ siri ike n'ihi ọnọdụ.
Onye nnọchiteanya nke akụ na ụba Volgograd ọzọ - Murad Kurshumov - ekwenyeghị na echiche a. Dị ka ya si kwuo, na ọbịbịa nke ngwaahịa Kherson, ndị niile sonyere na ahịa Russia ga-esonye na asọmpi ahụ: "Ndị ọrụ ugbo nke mpaghara Kherson nwere ahụmahụ mmepụta ihe, na-arụ ọrụ site na iji teknụzụ ọgbara ọhụrụ, na-eji ngwá ọrụ dị mma nke ọma, ma bụrụ ndị a kwadoro. na-ebuga ngwaahịa ha na Europe ruo ogologo oge. Ha na-eto eto eyịm dị mma na ọnụ ala dị ala, ha ga-agakwa n'ahịa anyị - n'agbanyeghị ọkwa ọnụahịa - naanị n'ihi na a ga-ererịrị ngwaahịa a ga-esi na ya pụta, na nhọrọ nke ntụziaka nnyefe abụghị nnukwu.
Onye ọrụ ugbo enweghị obi abụọ ọ bụla na mpịakọta nke owuwe ihe ubi Kherson ga-adị ịrịba ama: "Ọrụ ugbo anaghị akwụsị, n'agbanyeghị ihe isi ike. Ndị mmadụ ghọtara na ọdịnihu ha dabere na nsonaazụ ọrụ ha. Ikekwe ha kụrụ obere ka ọ dị na mbụ, mana ekwesịrị iburu n'uche na Kherson nwere ihu igwe dị mma, nke na-enye gị ohere ịkụ mkpụrụ ma emesịa were ihe ubi ọ bụghị na njedebe nke Septemba, mana na njedebe nke Ọktọba. Ha makwa ka esi echekwa yabasị n’ebe ahụ, enwere nnukwu ebe nchekwa ọgbara ọhụrụ.”
Dị ka Murad Kurshumov si kwuo, ọnụ ahịa ahịa ga-ada n'ihi nnyefe ndị a. Naanị ọnụ ahịa dị elu nke ibuga ngwaahịa na mpaghara Russia nwere ike bụrụ ihe mgbochi.
Yuriy Lemyakin na-ebu amụma maka mbelata nke ọnụahịa n'ahịa (ọ bụ ezie na ihe ọkụkụ ndị ọzọ nke borscht dị iche iche): "Ọ bụrụ na m bụ ndị na-emepụta nduku, m ga-eche: na mbụ, poteto sitere na Kherson na Nikolaev gara Europe, ugbu a, o yikarịrị, nke a mmiri ga-agara anyị. "
Ma dị ka onye ọrụ ugbo kwenyesiri ike, mkpesa nke ndị ọrụ ugbo Russia na nke a agaghị abụ ihe na-ekwesịghị ekwesị: "N'afọ gara aga, a na-ere poteto n'oge owuwe ihe ubi maka 40-45 rubles / kg, kabeeji - 60 rubles / kg, beets. - 70 rubles / n'arọ. Apụghị m na ndị ọchịchị ga-enye ndị ọrụ ugbo Kherson uru kachasị (ma eleghị anya naanị maka afọ a) ka ngwaahịa ndị dị ọnụ ala na-aga Russia na ahịa ahụ jụrụ ntakịrị. "
Murad Kurshumov na-ekwusi ike na mbata nke ngwaahịa Kherson n'ụzọ ụfọdụ nwere ike inwe mmetụta dị mma na ahịa, ebe ọ bụ na ndị na-azụ ahịa taa chọrọ akwụkwọ nri dị ọnụ ala. Maka ndị na-emepụta ugbo, ọnụ ahịa dị ala mana kwụsiri ike dịkwa mma karịa mwụli elu site na ndekọ dị elu ruo ọdịda.
"Ana m akwado mgbe niile ire ngwaahịa dị mma na ọnụ ahịa nkịtị. Ya mere, ndị ọrụ ugbo na-enweta uru ha, na ndị na-ere ahịa, na ndị mmadụ na-eju afọ.
Ma ndị ọrụ ugbo na-enwe nchegbu dị ukwuu banyere ọnọdụ mgbe ọnụ ahịa ngwaahịa dara n'okpuru ọnụ ahịa. Ndị na-emepụta kabeeji echeworị nsogbu yiri nke a n'oge a. Murad Kurshumov kwuru, sị: “Owuwe ihe ubi amalitelarị, ọnụ ahịa kabeeji dara pasenti 80 n'ime otu izu. Ịre ya na ọnọdụ ndị dị otú ahụ pụtara ịrụ ọrụ "na-acha uhie uhie."
"Ụlọ ọrụ anyị ga-egosipụta n'afọ a na ha nwere ike ịrụ ọrụ n'ihu asọmpi na nsogbu kachasị njọ," Yury Lemyakin na-ekwu.
Oge ga-akọwa otú ihe ga-esi etolite n'ahịa n'ọdịnihu. Ka ọ dị ugbu a, ndị sonyere na nkata telegram kwenyere n'otu ihe: taa, anyị kwesịrị ịrụ ọrụ n'ụzọ na ọnụ ahịa ọnụ ahịa dị ntakịrị, mkpụrụ kachasị, na àgwà ngwaahịa dị mma. Ụzọ a bụ isi ihe ga-eme ka ụlọ ọrụ ugbo na-aga nke ọma n'ọnọdụ ọ bụla.
Tags: Mpaghara Khersonọnụahịa maka akwụkwọ nri na poteto
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na UK bidoro site na ikuku
AKA FARMERS FARMERS NA-AKW PKWỌ POTATOES